သင်ဟာ Creative (ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးသူ) တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား – Live the Dream
သင်ဟာ Creative (ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးသူ) တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား
လူတိုင်းမှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအတော်များများယုံကြည်ထားတာကတော့ ကိုယ့်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှု မရှိဘူးလို့ထင်တတ်ကြတယ်။ အဲ့တာအမှန်လား။
၁. Creativity ဆိုတာ
ဖန်တီးမှု (Creativity) ဆိုတာကို အတော်များများက စိတ်ကူးယဉ်မှုနဲ့ မှားယွင်းတတ်ကြတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်မှု (Imagination) က ဖန်တီးမှုရဲ့အစပဲ ရှိတာပါ။ ဥပမာ ကိုယ်က သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အလွယ်တကူ ဆရာဝန်တွေနဲ့ Appointment ယူနိုင်ဖို့ Application တစ်ခုခုကို တီထွင်မယ်လို့ ကြံဆတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးဟာ စိတ်ကူးပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွေးကို သေချာချင့်ချိန် Plan ဆွဲပြီး တစ်ခြားသူတွေနဲ့ မတူဘဲ အကောင်းဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်တာကိုမှ Creativity လို့ဆိုရမှာပါ။
တော်တော်များများစိတ်ကူးထဲမှာ တီထွင်ဖန်တီးမှုကို အနုပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်က တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ကိုယ်က သီချင်းရေးနိုင်မှ၊ အဆိုတော်ဖြစ်မှ၊ စာရေးဆရာဖြစ်မှ ဆိုပြီးဘောင်တစ်ခုမရှိပါဘူး။
အစစ်အမှန် Creative ဖြစ်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်နေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုခုကို အသစ်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ရင် သင်ဟာ Creative ဖြစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီ့ အခက်အခဲက အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် အသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
၂. Creativity ကို တားဆီးနိုင်တဲ့ အရာတွေ
လူတိုင်းမှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အနည်းနဲ့ အများပဲ ကွာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို တားဆီးနိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေတတ်ကြတာပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့် Idea ကို အရမ်းတွေးမိပြီး အတွေးလွန်သွားတဲ့အခါ
“ဒီ ဖြေရှင်းနည်းက မကောင်းဘူး
ငါက ဘယ်တုန်းက အသုံးကျခဲ့ဖူးလို့လဲ”
အစရှိသဖြင့် တွေးမိပြီး ကိုယ့် Idea ကို တခြားသူ မဖယ်ခင်မှာ ကိုယ်တိုင် ဖယ်မိတတ်ကြတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေက သာမန်လူတွေမှာပဲ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေ စာရေးဆရာတွေ ပန်းချီဆရာတွေ စွန့်ဦးတီထွင်သူအားလုံး ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲပါ။
တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ မကျေနပ်မှုတွေ၊ ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေတွေ၊ မိသားစု ပြဿနာတွေ၊စိတ်မပျော်ရွှင်မှုတွေကလည်း တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေတတ်ပါတယ်။ တခြားသော အကြောင်းအရာတွေကို အရေးပေးမိတာကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ချင်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို လျစ်လျူရှုသွားကြတယ်။ မေ့လျော့တတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ပေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေရင် Creativity ကို မွေးမြူဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ အဓိကက Creative ဖြစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သူဖန်တီးနေချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေ့လျော့သွားကြတယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကို သတိမမူတတ်ကြဘူး။ ဗိုက်ဆာတာမျိုး၊ နေ့လည်မှာ အိပ်ချင်နေတာမျိုး၊ ပျင်းရိနေတာမျိုး မဖြစ်တတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကို တွေးပူပြီး မစဉ်းစားတတ်ကြဘူး။အရာအားလုံးကို မေ့သွားပြီး ဖန်တီးမှုမှာပဲ မွေ့လျော်ကြတယ်။ အဲ့လို အခြေအနေ(Stage) မှာ ဖန်တီးတဲ့ အရာကို စိတ်ပညာလောကမှာ Flow Stage ကို ရောက်နေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖန်တီးမှု ရှိနေလား၊ မရှိနေလားဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
၃. Creativity ကို ဘယ်လိုမွေးမြူမလဲ
ငယ်ငယ်တုန်းက အားလုံးဟာ Creative ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ကျောင်း၊အလုပ်နဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကြောင့် Creative ဖြစ်နိုင်စွမ်း လျော့ပါးလာကြတယ်။ သူများတစ်မျိုးမြင်မှာကို ကြောက်တတ်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဖန်းတီးမှုကို မယုံကြည်ကြတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပိုင်းမှာ အားနည်းသွားကြတာပါ။ ဒါကြောင့် လုံး၀ လက်လျှော့လိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ဦးနှောက်ရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မသိဘဲနဲ့ Creative ဖြစ်နိုင်စွမ်းတွေ ကျန်ပါသေးတယ်။
• တကယ်လို့ကိုယ်က ကိုယ့်ဖန်းတီးမှုကို အရမ်း အဆိုးမြင်နေရင် ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးမြင်တတ်တဲ့ အကျင့် ကို ပြောင်းဖို့ သတိလေး ကပ်ပြီးကြည့်ပါ။ ဥပမာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ Creative ဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင် Post Card လေးဖန်တီးပြီး အရောင်ခြယ်စာရေးထားပြီးပြီ။ အဲ့ အချိန်မှာ “ဒီ Post Card က မလှဘူး။ သူကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဆိုပြီး အဆိုးတွေးနေတဲ့ အတွေးကို သတိလေးထားပြီး စောင့်ကြည့်ပါ။ “ဪ…ငါအခုပဲ ဖန်တီးထားတဲ့ Post Card လေးကို အဆိုးမြင်မိတာပဲ။ ငါအဆိုးထင်သလို ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူလက်ခံမှာပါ” ဆိုပြီး နောက်တစ်ဖက်ကနေ ကြည့်တတ်တဲ့ အကျင့် ကို မွေးမြူပါ။ မင်မင်အနေနဲ့ ချက်ချင်း အားလုံးကို အကောင်းမြင်ဖို့ မကြိုးစားစေချင်ပါဘူး။ အကောင်းမြင်ဖို့ မကြိုးစားခင်မှာ ကိုယ်တွေးတတ်တဲ့ အတွေးဆိုးတွေကို အရင် စောင့်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
• Creative ဖြစ်အောင် ကိုယ့်အနေနဲ့ ကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင် ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုက မှန်ကန်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးမေးတတ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ လက်ရှိပြဿနာကို နည်းလမ်းအသစ်နဲ့ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုးမေးသင့်လဲ၊ အဲ့မေးခွန်းအတွက်အဖြေတွေ ဘယ်မှာ ရှာမလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ အဖြေရှာတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ နည်းပြ မဟုတ်ရင် ကိုယ်လေးစားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဆီကနေ အကြံဉာဏ်တောင်းဆိုလို့ရပါတယ်။
• နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အကြံပြုချင်တာကတော့ တကယ်လို့ ကိုယ်ဖန်တီးနေတဲ့အနုပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသစ်အဆန်းဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သေးသည်ဖြစ်စေ၊ ကြီးသည်ဖြစ်စေ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ ဖန်တီးမှုရဲ့ တကယ့်အနှစ်သာရဟာ အောင်မြင်မလား၊ ကျရှုံးမလား၊ ပိုက်ဆံ ရှာနိုင်မလား၊ မရှာနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ အချက်တွေမှာ မမူတည်လို့ပါ။ လက်တွေ့မှာတော့ ဖန်တီးမှုရဲ့ အနှစ်သာရက ဖန်တီးရမယ့် Idea တစ်ခုနဲ့ ဖန်တီးသူ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဖန်တီးမှုကို တိုးတက်စေဖို့အတွက် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ဘာပြောမလဲဆိုတာကို မကြည့်မိဖို့၊ စိတ်ကူးထားရာ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ကိုပဲ အာရုံစိုက်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Creative လို့ ယူဆထားတယ်ဆိုရင် အမြဲတမ်း ကိုယ့်စိတ်ကို ကောင်းတဲ့ အတွေးအမြင်နဲ့ ကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ Creative ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို Goal တစ်ခုလို မသတ်မှတ်မိပါစေနဲ့။ Creativity က ကိုယ်တိုင်သွားရမယ့် လမ်းကြောင်းငယ် Process တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတွေကိုလည်း ကိုယ့် Creativity ကို အကောင်းဆုံးသရုပ်ဖော်စေလိုသော ဆန္ဒဖြင့်…